Imisebenzi eDaily for Candidates Candidates - Layisha i-Resume Yakho Namuhla! 🥇
Kushicilelwe ngu Dubai City Inkampani at January 13, 2018
Imisebenzi e Dubai nge-Filipino
Imisebenzi ku Dubai yabathengisi basePhilippines. LoMuzi uyindawo ethandwa kakhulu yabakhethelwa ePhilippines. Kuningi abafuna umsebenzi abafika e-UAE. Empeleni, abaphathi basePhilippines banomqondo omuhle we ibhizinisi isipiliyoni. Kanye nezifundo ezinhle. Kunjalo ukuthola kalula umsebenzi eDubai. Ngaphezu kwakho konke iPhilippines manje sekusemthethweni iRiphabhulikhi yasePhilippines. Akukho okulukhuni ukundiza usuka ePhilipines uya lapho UAE. Eqinisweni isimo esingabumbene sobunye. Izwe lesiqhingi e E-Southeast Asia abafuna umsebenzi. Ngakho-ke akukude kangako Dubai City. Futhi ngamanye amagama, abantu abavela ePhilippines bakhona wamukelekile e-UAE ngokuqashwa.
Leli zwe lihlala entshonalanga yePacific Ocean. Kubalulekile ukuqaphela ukuthi liqukethe iziqhingi ze-7,641. Ngempela, lokho kuhle kakhulu uma ungathanda ukuvakashela uFiliphu njengomvakashi. Iningi ubufakazi obuphoqelela abafuna umsebenzi. Ukuthi bazokwazi ukuthola umsebenzi Emirates. Kulula kakhulu ukuthi kukhona cishe ukusesha kwe-14,000. Kusha kwi-inthanethi yomsebenzi inthanethi. Mayelana nokuthi ungasuka kanjani ePhilippines uye eDubai.
Kubantu base-Dubai e-Dubai, singomunye wabahamba phambili. Singabantu manje ikusiza ukuba ufake ku-Emirates. Ikakhulu uma ufuna umsebenzi ngesiFilipino. Dubai City Inkampani usize abantu abangaphezu kwezinkulungwane ezingamashumi amahlanu abafuna umsebenzi ukuze thola umsebenzi eDubai njengo-Uber Driver.
Sikusiza ukuthi Uqale ukusebenza e-Dubai
Chofoza ngezansi ukuze Layisha i-CV!
Sinikeza Imisebenzi e Dubai nge-Filipino!
Imakethe yomsebenzi e-UAE efuna ochwepheshe
Abasebenzi ikakhulu ePhilippines
Inkampani Dubai City Inkampani ephethwe futhi yasungulwa. The Inhlolovo yokufuna umsebenzi yakamuva. Futhi ukukhomba ukuthi sihloliwe uchwepheshe amafemu okuqasha abaqeqeshiwe e-Dubai City yamaNdiya. Futhi ngenxa yalokho umsebenzi ovela ePhilippines. Sizokwazi ukufinyelela kumathuba amaningi wemisebenzi eDubai. Sengisho nje, Izinkampani zase-Emirates sezikhulile. Futhi imisebenzi yabo yokuqasha e2018 bayazi kahle. Futhi ngakolunye uhlangothi ukuthi kulaba basebenzi base-Asia. Inamathuba amahle okuba eziqashwe izinkampani ezilinganiselwe e-UAE.
Ngokuhamba kwesikhathi, unethalente abazingeli abasha abathweswe iziqu. Ngokwengxenye enkulu, ngokuqinisekile thola umsebenzi. Emisebenzini ethile yokuphatha. Kususelwa ekubuyekezweni kwebhizinisi lethu kwabaphathi be-HR e-UAE. Ngaphandle kokulibala i-Emirates, abaqashi bazogxila kuyo izinhloso zomsebenzi ukubeka izidingo e-UAE. Kusuka ku-2018 kuze kufike ku-2020 ngokuheha zonke izipho eziphothuliwe. Futhi abaphathi abakhulu abaqeqeshiwe bephesheya baseFilipino. Futhi nakanjani ngaphambili Uhlobo lwezemisebenzi kakhulu e Dubai izonikezwa e-Emirates. Cishe bonke abafuna umsebenzi eDubai Expo 2020.
Kuze kube manje, abasebenzi basePhilippines banalo ulwazi olufanele lomsebenzi nge-MBA. Kodwa bonke abasebenzi ngokuzumayo abavela lapho. Izidingo zokusebenzela ukuqina emakhono wokuxhumana. Futhi i-acumen yezentengiso yemakethe yamabhizinisi aseMiddle East. Imisebenzi eDubai yePhilippines lena yindlela yabavakashi abasha.
I-POEA I-Job Ukuqasha - I-Philippine Overseas Ukuphathwa Kwezisebenzi
Njengoba kuye kwaphawulwa indlela enhle yokuthola umsebenzi eDubai yi-PoEA. Ngokuvamile, uhulumeni uyaqhubeka nokufunda ejensi. Futhi ukusebenza kwe-ejensi kuzama njalo usizo lokuqashwa kwamanye amazwe. Yiqiniso, indlela engcono kakhulu yokufuduka ePhilippines eya e-Dubai. Uvele usebenzisa ama-ejensi wokuqashwa kukahulumeni. Ngeke kube khona ingozi ehilelekile uma usuyela e-Emirates.
I-POEA ingakuxhuma ngempela nabasebenzi bakwa-HR e-Dubai. Njengoba sekuphawulwe izwe lebhizinisi lase-Emirates. Yibani ngokushesha ngokubambisana nabo bonke izinkampani zokuqashelwa e Dubai ngenxa yowesifazane ozinikezelayo. Ngaphansi kwalezo zimo uhulumeni ePhilippines. Ngokufingqiwe ku-2019 iba isizukulwane sabasebenzi bebhizinisi abane-smart. Futhi ukulondolozwa kwemisebenzi ehloniphekile kusiza abasebenzi basePhilippines abafudukayo. Ukuze uthole umsebenzi e-Dubai City ikakhulukazi e-Emirates Airline. Ukubeka ngenye indlela, ungaxhumana nePEEA. Futhi bazokusiza ukukhuthaza imininingwane yokuqashwa kwakho. Futhi zama ukukuxhuma nomphakathi wasePhilippine ngaphakathi eDubai.
Imisebenzi ye-Poea e-Dubai isendleleni ye-2020. Nakuba lokhu kungase kube uhulumeni weqiniso e-UAE. Ngokuqinisekile basiza abasebenzi basePhilippines Dubai. Uku wabekwa imisebenzi yase-Emirates nge-POAE. Ukungasho lutho ngokusezingeni nokuhlelwa. Ukuze ukwazi ukuphatha ukuthola imisebenzi e-Emirates. Uhlelo lokubusa kwabasebenzi baseFilippines abathuthela emakhaya. Yiphinde itholakale lapho uxhumana nePhilippines Overseas Ukuphathwa Kwemisebenzi Ihhovisi.
I-2019-2020 Kudingeka abasebenzi basePhilippines
The I-United Arab Emirates Empeleni manje kokuba nedolobha elihlakaniphile. Lezi zinsuku ziba zesibili ngobukhulu izindawo zabasebenzi base-Asia. Ngaphansi kwalezo zimo, expats aphesheya kwezilwandle amaFilipino. Mane nje uthande ukuthuthela Emirates. Kukhona kuphela I-Saudi Arabia eceleni kwaso. Ngalesi sizathu, i-PoEA inamathuba amaningi emisebenzi avulekile. Ye-2018 kuze kube Imisebenzi ye-2020 Expo e-Dubai.
Ekuhlaziyeni kokugcina, kufanele ufune uhlu lwezinhlangano ezisebenza ngezisebenzi kanye nezindawo zemisebenzi. Futhi lokho kufanele kukusize. Iba umzingeli omusha we-career e-UAE. Ukuhlaziya ngazo zonke izindlela izikhungo zokuqasha. Nezinkampani zokubekwa ukwenza umsebenzi wakho wokufuna uchume isihluthulelo sempumelelo. Ngasikhathi sinye ubheke inethiwekhi yamahhovisi abaphathi. Futhi uchwepheshe ongakusiza. Ukuze ube umsebenzi ofanelekayo waseFilippines.
Njengamanje, Abaqaphi bePhilippines banama-oda wemisebenzi atholakalayo kumakhasimende we-UAE. Ukungasho lutho ngabasebenzi abanamakhono basePhilippines. Ngubani osuvele unomsebenzi e-7 Emirates. Ngophawu olufanayo, bavele babuze ngqo ezinhlanganweni zokuqashwa. Kuleso simo, ama-ejensi aphezulu wokuqasha abekwe ohlwini lwabasebenzi ongabathola ku-POAE. Ngaphezu kwalokho, Imisebenzi ku I-Dubai ye-Filipino thola ngokuvuleka. Ku-7th Emirates bese uqala uhlelo lwakho lokusebenza.
Yiba expat Filipino e Dubai
Uma nje ufike e-Dubai. Cishe uyazibuza indlela yokuthola umsebenzi e-Dubai nge-visa yokuvakashelwa. Kunezindlela eziningana zokwenza lokho. Isibonelo, ungabheka umqondisi wethu. Iseluleko se-Dubai Care in search job nezindlela zokuzithengisa. Thola ukuthi ungayisebenzisa kanjani ngokomzimba imisebenzi yakho efanele ukufakwa ku-UAE.
Omunye umqondo ohlakaniphile uwukuthi jisiqondisi semisebenzi eDubai. Ungashintshana ngemibono nabanye abahamba kwamanye amazwe bese ngasikhathi sinye uthole abaphathi abaqashayo e-UAE. Abavakashi bewebhusayithi yethu ukujoyina kwendatshana yethu emisebenzini Yezindiza Emirates. Ngaphezu kwalokho, bafana nokubheka izicelo zansuku zonke ezivela kubaphathi bokuqasha. Ngale ndlela izivakashi zethu zithola umsebenzi njenge expat yasePhilippines e-UAE.
Ngakolunye uhlangothi, uma ufuna ukuba i-expat yasePhilippines e Dubai. Kufanele nakanjani uhlole izinkampani eziqashiwe phezulu e Dubai. Emininingwaneni yonyaka olandelayo iba yisikhiye sempumelelo. Isibonelo, ungathola izeluleko ezinhle ngemisebenzi eDubai yokuxoshwa kwePhilippines. Bese uthumela i-CV yakho bese mane uthole umsebenzi omusha.
Ngokolunye uhlangothi, sicela uphinde ubheke umhlahlandlela wethu wokuphuma. Inkampani yaseDubai City ibhala ngayo indlela yokuthuthela emsebenzini e-Dubai. Ukuthola umsebenzi enhloko-dolobha ye-UAE kudinga imizamo eminingi kunalokho osolwayo.
Indlela yokuthola umsebenzi njenge-Expat International?
Iningi lezivakashi zethu ezithola umsebenzi e-UAE ngaphezulu ulwazi lwama-expats. Isibonelo, ungathumela izigidi zezicelo online. Kepha uma ungakwazi ukuthola abaphathi abaqashayo. Ngokuqinisekile, uzolahlekelwa yisikhathi sakho ngaphandle kokuthola umphumela nhlobo. Ukuzitholela kwizicelo zenhlalo ezinjenge sayithi yomsebenzi ye-TCS. Kuyinto ethandwa kakhulu yokusesha okungajwayelekile abafuna umsebenzi eKapistani kanye nabokufika evela eNdiya abafuna imisebenzi e-Dubai. Izikhathi zamazwe ngamazwe zihamba ukusuka ezweni lakubo ziya e-Dubai nsuku zonke. Ngakho ukuthola le misebenzi eDaily for Filipino iyavuma ukuthi ngeke kube yinto elula.
Ukuthola umsebenzi njenge-expat kuyinhlangano enkulu enhlangothini enhle ongayithola. Dubai City iyona engcono kunazo indawo ukuthola umsebenzi. Enye indlela ehlakaniphile yokuthola umsebenzi e-UAE. Ngokuvamile ukukhuluma thola ukuqashwa kwemisebenzi e Dubai. Lo mkhakha ukhula ngokushesha kakhulu eDaily nase-Abu Dhabi. Ngenxa yalesi sizathu, imisebenzi eDairobi yamazwe aseFilippines avuliwe ngokuvakalayo.
Ngakolunye uhlangothi, wonke umuntu uyazi lokho inhloko ye-UAE yindawo engcono kakhulu yomsebenzi. Amanye amazwe nawo anele ngokwanele ukuthola umsebenzi. Ungathola izikhala zemisebenzi ezinhle nezikhokha kahle eSaudi Arabia naseQatar. Kepha iningi imikhakha edumile yabasebenzi bamanye amazwe njengePhilippines. Ngokuvamile ukukhuluma umsebenzi wezimoto e-UAE. Kunezisebenzi eziningi kakhulu ezidingekayo endlini yokugcina impahla. Ngakolunye uhlangothi, kufanele ubuke nezinkampani eziphezulu emsebenzini. I-recruiter e-Dubai futhi I-Gulf ukuqasha iwebhusayithi yokuqasha. Kufanele ngempela ukusebenzisa ne-CV yakho.
Umsebenzi e-Dubay for abasebenzi basePhilippines
Kuze kube manje, namanje Indlela engcono kakhulu yokuthola ingxoxo yokuhamba-in. Izisebenzi zasePhilippines zikhula isizwe e-United Arab Emirates. Inkampani yase-Dubai City isiza abaningi abafuna umsebenzi emhlabeni jikelele. Empeleni, abafuduka ezweni ukuthola abaqashi e-Dubai nase-Abu Dhabi. Inkampani yaseDaily City izama njalo ukweluleka abanye ukuthola umsebenzi e-UAE.
Njengesi-expat sase-Filipino, unga thola umsebenzi nezingane eDubai. Indlela engcono kunazo zonke ukukhuluma nabasebenzi ngokuqondile. Umqondo omuhle kakhulu ukusebenzisa WhatsApp abafuna umsebenzi omusha ukuthola amathuba emisebenzi. Iningi labafuna umsebenzi abavakashela i-UAE. Ukwenza izinto eziningi ngokungalungile, isibonelo ukusesha imisebenzi ekhokhelwa kakhulu. Futhi empeleni, konke okudingayo kumane kunikezwe umsebenzi oyisisekelo. Isibonelo, ungaqala umsebenzi wokuba yisisebenzi esishisa izikhotha. Lapho-ke ungathuthuka ngamathuba okuphatha ihhotela. Ukuqala nje umqondo omkhulu.
Amathuba amahle kakhulu okuthola amathuba okufika e-Dubai. Ingabe, kunjalo, I-Google imisebenzi yase-Dubai. Khumbula lokho imakethe yomsebenzi weselula liyakhula usuku nosuku. Ngakho-ke qhubeka ufuna eminye imisebenzi yezobuchwepheshe. Ungakhohlwa ukuthi e-Emirates kunokutshalwa kwemali okutshala imali yakho expo 2020 imisebenzi eDubai nase-Abu Dhabi. Ngakho-ke qiniseka ukuthi usukulungele ukufuduka.
I-Abu Dhabi yesiFilipino
Kuze kube sesikhathini samanje, kukhona futhi amanye amadolobha azosebenza e-UAE. Uma ufuna inkampani yokuqasha imisebenzi ku-2020. Dubai City Inkampani njalo inikeza ngesandla esiwusizo. Ukusuka Dubai ukuya e-Abu Dhabi naseSharia. Siphatha amasevisi wokuqasha kuwo wonke ama-United Arab Emirates. Yiqiniso kwezinye izimo, sisiza futhi ukuthola umsebenzi eKatar naseKwaiteni. Ngokwesibonelo, Abu Dhabi yindawo engcono kakhulu yokuqala imisebenzi yothisha e-UAE.
U-Abu Dhabi wePhilippines ungenye izindawo ezinhle kakhulu zokuhlala. Kuqhathaniswa kancane okushibhile neDubai. Kepha qiniseka ukuthi akuwukuphela kwabaxoshiwe abafuna umsebenzi. Indian, Abadingizi be-Qatar. Ngaphezu kwalokho abafuna umsebenzi eNingizimu Afrika bonke bangabekwa e-United Arab Emirates. Ngokwesibonelo, AmaNdiya afuna imisebenzi eGulf. Ngakho kungaba umqondo ohlakaniphile ukwandisa umsebenzi wakho wokusesha.
I-Abu Dhabi nayo inezinkampani ezinkulu zokusebenza. Bheka Imisebenzi ye-Middle East Cryptocurrency. Kunethuba elikhulu lokufuna umsebenzi kanye nezivakashi ezintsha. Imisebenzi eDubai yabasebenzi basePhilippines ingaba ngeyakho. Faka i-CV yakho namhlanje enkampanini yethu.
Imisebenzi e Dubai nge-Filipino kanye nokufuna umsebenzi ku-UAE!
Manje sisebenzela imisebenzi e-Dubai yamaFilippines
Thola UJob e Dubai? ngokumangazayo ungathola lokho. Umsebenzi waseFilippines angaqala futhi umsebenzi omusha ku imisebenzi yebhange Dubai! Ngakho-ke noma ngabe unquma ini, uzoqala kuphi okwakho ukusesha umsebenzi. Kusuka izinkampani eSaudi Arabia kuze kube Dubai City Company. Silapha ukukusiza ukuthola inketho entsha ku-United Arab Emirates.
Inkampani yaseDubai City manje ukuhlinzeka ngemikhombandlela emihle yephupho eDubai. Ithimba lethu linqume ukwengeza ulwazi ngolunye ulimi lwethu I-Dubay expats. Ngakho-ke, unalokhu engqondweni, manje usungathola iziqondiso, amathiphu nomsebenzi e-United Arab Emirates ngolimi lwakho.